Kick-boxing – Mada 2016 : mangataka «combat de défi» i Séverin | NewsMada
Kick-boxing – Mada 2016 : mangataka «combat de défi» i Séverin
Tontosa soa aman-tsara ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja kick-boxing. Tsy nampoizina ny naharesy an’i Severin Mamonjisoa, tompondaka eran-tany. Mangataka “combat de défi” ny tenany.
Anisan’ny vokatra tsy nisy nanam-po ny nandresen’i Fazarally, an’i Mamonjisoa Séverin, tompondaka eran-tany amin’ny taranja kick-boxing, teo amin’ny – 63, 5 kg, nandritra ny fifaninanam-pirenena 2016, natao teny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny zoma lasa teo.
Taorian’ny fahavitan’ny adin’izy mirahalahy, mangataka “combat de défi”, i Séverin Mamonjisoa ary i Fazarally hatrany no tiany hiady aminy. Raha ny fanambarany hatrany, tsy mbola tena ao anatin’ny heriny tsara ny lehilahy, taorian’ny fahavoazana nahazo azy.
Ankoatra izay, nanjakan’ny ligin’Analamanga ny fifaninanana satria saika mpikatroka avy amin’izy ireo avokoa no nibata ny fandresena na ho an’ny sokajy “junior” na teo amin’ny “sénior” lahy sy vavy.
Na izany aza, mbola misongadina ihany koa ny fahaizan’ireo mpiady ao anaty ekipam-pirenena. Anisan’izany, i Lava kely, teo min’ny -54 kg “junior”, izay nanilika an’i Dominique avy amin’Analamanga ihany. Nahaliana ny rehetra ny adin’izy mirahalahy satria nanohitra hatramin’ny farany i Dominique, saingy tombony ho an’i Lava kely ilay traikefa amin’ny fahazarana ady goavana. Ankoatra izay, i Francklin avy amin’ny ligin’Antsinanana, nandresy teo amin’ny sokajy – 67 kg rehefa nanilika an’i Fréderic avy amin’Analamanga.